Abu Dhabi mankany Baku: Voalohany amin'ny Aviation
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Abu Dhabi mankany Baku: Voalohany amin'ny Aviation
Ny Etihad Airways dia nanangana sidina voalohany voarindra izay mampifandray an'i Abu Dhabi sy Baku.
Ny sidina voalohany, EY297, dia nandao an'i Abu Dhabi omaly nitondra delegasiona manokana ahitana diplaomaty, olo-manan-kaja, solontenan'ny haino aman-jery ary mpikambana ambony ao amin'ny ekipa fitantanana Etihad Airways. Rehefa tonga tao Baku, ny fiaramanidina dia niarahabaina tamina tafondro rano nentim-paharazana, arahin'ny fampisehoana mahazatra ny sainam-pirenena Emirati sy Azerbaijan avy teo am-baravarankely.
Peter Baumgartner, Lehiben'ny mpanatanteraka ao Etihad Airways, dia nilaza hoe: "Faly be izahay fa handefa sidina voalamina eo anelanelan'ny Abu Dhabi sy Baku, ny serivisy tokana misy fandaharana mampifandray ireo renivohitra roa. Misy ny fangatahana matanjaka avy amin'ny tsena roa ho an'ny asa mivantana sy mivantana amin'ny alàlan'ny zotra, ary namaly an'ity fitakiana mpanjifa miakatra ity izahay. Ireo sidina vaovao dia hanatsara ny fifamoivoizana avy any UAE ary hanamafy ny fifandraisana roa tonta eo amin'ny firenena roa tonta.
"Ny programa fandoavana visa nampidirin'i Azerbaijan ho an'ny teratany UAE tamin'ny 2015 dia namporisika ny olona liana tokoa, ka nahatonga mpitsidika marobe hatramin'ny nampiharana azy."
Etihad Airways sy Azerbaijan Airlines dia nanambara fiaraha-miasa codeshare izay mahita an'i Azerbaijan Airlines mametraka ny kaody 'J2' amin'ny serivisy Etihad Airways eo anelanelan'ny Baku sy Abu Dhabi.
Amin'ity fiaraha-miasa ity dia afaka mamandrika sidina codeshare mankany sy avy any Abu Dhabi ireo vahiny Azerbaijan Airlines ary mifandray amin'ny tambajotra eran-tany eraky ny Etihad Airways.
Jahangir Asgarov, filohan'ny Azerbaijan Airlines CJSC, dia nilaza fa: “Azerbaijan Airlines sy Etihad Airways dia mpiara-miasa maharitra amin'ny sidina sivily. Ny fandefasana sidina iraisana eo amin'ny kaompaniam-pitaterana anay roa dia hahafahan'ny olom-pirenena Azerbaijan hanitatra bebe kokoa ny fari-tanin'izy ireo manerantany, mahasarika mpizahatany mihamaro ary hamorona fotoana bebe kokoa ho an'ireo mpandeha raharaham-barotra. ”
Ny Etihad Airways dia nanendry an'i Saeed Mohammad Ahmed ho mpitantana ny firenena Azerbaijan. Teratany UAE, izy dia matihanina amin'ny seranam-piaramanidina izay nanana andraikitra teo aloha tamin'ny kaompaniam-pitaterana dia ny Business Development Manager ho an'ny Etazonia monina any Chicago. Amin'ny toerany vaovao dia tompon'andraikitra amin'ny fahombiazana stratejika sy ara-barotra amin'ilay lalana vaovao izy, ary amin'ny fampivelarana ny fifandraisan'ny orinasa amin'ireo orinasa lehibe Azerbaijanina sy ny indostrian'ny fizahan-tany.
Manidina intelo isan-kerinandro amin'ny fampiasana Airbus A136 seza 320, namboarina amina seza 16 ao amin'ny Class Business sy 120 ao amin'ny Economy Class, ireo sidina vaovao dia hiasa isaky ny alarobia, zoma ary asabotsy, manome fotoana ara-potoana mazava ho an'ireo vahiny hiainga sy tonga any Abu Dhabi ary Baku. Ny fandaharam-potoana dia manome fifandraisana mety amin'ny sy avy amin'ny tamba-jotra manerantany ary efa natokana ara-potoana mandritra ny herinandro mba hanomezana fifangaroan'ny faran'ny herinandro, fijanonana fohy ary safidy fitsangatsanganana orinasa.
Wynn Resorts sy Steve Wynns fitondran-tena ratsy: nangataka ny fanampianao…
Ny katedraly lehibe any Italia dia miaro ny filaminana